Ebu News |
Nsogbu A Na-ahụkarị na Nhazi nke Ọkpụkpụ Ezinaụlọ
N'ọtụtụ ngwaahịa ngwaahịa, ihe achọrọ maka nha na ọdịdị nke ngwaahịa ndị ahụ dịtụ elu. Ya mere, ebu ndị na-emepụta ihe ndị e ji emepụta ụlọ na-achọ iji plastik mee ihe maka ịkpụzi ezi uche dị mma iji meziwanye mmepụta mmepụta nke ngwaahịa ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Otú ọ dị, na proc ...
Mwepu Nsogbu na Nrụpụta nke Daily Necessities akpụzi
Daily mkpa akpụzi mmepụta ike ịhapụ ọgwụ ebu factory, ugbu a kwa ụbọchị mkpa ebu technology bụ ihe na ndị ọzọ elu, iji mma izute ndị a chọrọ, isi ebu shrinkage a chọrọ, nke bụ ihe kasị bara uru uru nke kwa ụbọchị mkpa ebu . M ...
Ihe ndi ozo nwere ike ime ka odi nma
Iji na-enwe ike na-emepụta ruru eru akpa ngwaahịa, anyị ga-enye àgwà Crate akpụzi. Ya mere, ihe jikoro nwere ike melite ogo nke crates? Zụlite usoro crate ebu management management zuru oke, ghọta ngwaahịa data management, usoro data management, atụmatụ management na oge ...
Etu ị ga - esi mebie nrụrụ nke akpụ akpụ Dustbin
Enwere ọtụtụ ihe kpatara nrụrụ na mgbawa nke Dustbin Mold, nke metụtara usoro mbụ, ngwakọta kemịkal nke nchara, ọdịdị nhazi na akụkụ akụkụ nke akụkụ ahụ, na usoro ọgwụgwọ ọkụ. Cracks na-abụkarị egbochi, ma okpomọkụ t ...
Etu aga - esi edozi ụlọ ahịa ngwaahịa ụlọ
Ihe niile nwere otu ndụ. Iji gbatịkwuo ndụ ọrụ, anyị kwesịrị ịma usoro mmezi ziri ezi. Ndị na-esonụ bụ ezi mmezi ụzọ maka Ezinaụlọ Product akpụzi. Nke mbụ, nhazi oge mbụ nke ebu na-ebu usoro maka ngwaahịa ụlọ dị na nke ọ bụla ...
Nkọwapụta Nhazi Kwa Nebọchị maka forkpụzi Ihe Dị Mkpa
Ọrụ ndụ nke Daily Necessities Mold, na mgbakwunye na nhazi kachasị mma, imepụta oke nkenke, mmetụ ọgwụgwọ ọkụ dị elu, na nhọrọ kwesịrị ekwesị nke ngwa nhazi, ebu na ihe ndị ọzọ bụkwa akụkụ dị mkpa nke iji na mmezi. , taa ga - ...
Olee otú Mee Crate akpụzi na Long Life
Nke mbu, ezi ihe eji akpụzi akpụzi na etu esi eme ya. Ngwongwo ihe ruru eru ga-enwe nhazi zuru oke tupu ịmalite ọrụ ahụ. Ya mere Heya nọrọ ọtụtụ oge na-enyocha ihe nhazi ebu na ịkpụzi ebu, gụnyere demoulding draft angle, ngwaahịa elu microcosm, ọnụ ụzọ ámá usoro imewe, bụbu ...
Ọnọdụ nke Ribs na Gussets Na-emetụta Mdị Ebube Mgbakọ ahụ
A ghaghi ichota ihe nkwekorita nke obula mgbe eji aru aru na gussets. Enwere ike ịtụ anya oge ogologo oge ma ọ bụrụ na ọgịrịga ma ọ bụ gussets dịkwa mkpa maka oghere, mgbidi mgbidi, imi mmiri, mgbapu, eriri weld (ihe niile na-ebute nnukwu mkpakọ agbatị). Ọnọdụ nke ...
Mere Cooling Dị Mkpa Maka Isiokwu akpụzi
Uche nke usoro jụrụ oyi dị ezigbo mkpa na ịkpụzi ọgwụ. Nke a bụ n'ihi na ịkpụzi ngwaahịa plastik na-eme ka ọ dị jụụ ruo na oke nke isiike, wee wepụta ngwaahịa plastik ahụ na Tebụl akpụzi iji zere nrụrụ n'ihi ike mpụga. Ebe ọ bụ na obi jụrụ ...
Oche akpụzi aghọwo Mkpa ngwá ụlọ na Business Investment
Taa, omume nke iji arịa ụlọ plastik na-eto n'ike n'ike. Ngwongwo rọba enwetawo nnukwu ọganiihu ahịa. Ngwongwo rọba dị fechaa, na-adịgide adịgide, na-enweghị mmiri, dị mfe ibugharị, ọnụ ala, na-atọ ụtọ nke ọma, enwere ike ịme ya n'ụdị na agba dị iche iche, nke bụ isi ...
Kedu usoro mmepe ọkọlọtọ maka ebu ogwu ọgwụ?
Nke mbụ, see map ebu tupu ịbịaru eserese nzukọ nna ukwu ahụ, ịbịaru usoro ahụ kwesịrị ịdọrọ ma kwekọọ na ihe achọrọ nke akụkụ eserese na usoro data. Ogo nke usoro ọzọ ga-ekwe nkwa ga-eji akara "usoro nha" na eserese ahụ. Ọ bụrụ, a ...
Jụrụ Line n'ọnọdu
Ọnọdụ nke usoro dị jụụ dị oke mkpa iji nweta arụmọrụ dị mma nke akụkụ ahụ ma melite nsonaazụ akụkụ. Fig 5. 16 na-egosiputa ntuziaka maka nhazi nke kachasị mma. Otu ihe kwesiri iburu n'uche bu na uzo nkpuchi obi kwesiri ibu buru ibu iji nwee ihe kpatara ...